Boky miresaka ny miralenta |
Boky momba ny Transgenderism.
Walt Heyer dia nipetraka nandritra ny 10 taona tamin'ny maha vehivavy azy talohan'ny nanodinana azy. Manana lisitra feno momba ny boky hovakiana izy
Aloky ny volondavenona iray. Hitan'ny mpanoratra Patrick Byrne fa arakaraka ny fandinihana ny teny momba ny maha-lahy na maha-vavy dia vao mainka manjary tsy azo antoka, tsy mazava sy mifanipaka izy io ary mitarika ady ara-dalàna sy ara-kolontsaina lalina.
Ny boky kely volondavenona momba ny firaisana sy ny transgender. Ny mpanoratra Patrick Byrne dia manontany ny ideolojia ("finoana" filozofika misy fandaharam-potoana politika) ny transgenderisme.
Rehefa tonga i Sally i Harry - Ryan T Anderson Mety “voafandrika” ao amin'ny vatan'ny zazavavy ve ny zazalahy iray? Azon'ny fanafody maoderina atao ve ny "manendry" indray ny firaisana? Ny firaisana ara-nofo ve dia "voatendry" ho antsika voalohany? Inona no valiny feno fitiavana indrindra amin'ny olona iray mahatsapa ny maha-lahy na maha-vavy azy? Inona no tokony holazain'ny lalànantsika momba ny resaka "maha-lahy na maha-vavy"?
Inona no atao amin'ny zazavavy kely - Wendy Francis. Tsy misy olona afaka misafidy raha teraka zazavavy na zazalahy izy ireo. Ary ny iray tsy tsara noho ny iray hafa. Fa misy zavatra tsara be dia be amin'ny maha-zazavavy!
Inona no atao amin'ny zazalahy kely - Wendy Francis. Ny zazalahy kely dia lehibe amin'ny maha-lehilahy. Ny zazavavy tsy hanao izany mihitsy. Izany ve no mampiavaka ny zazalahy kely? Eny, izany ary antony maro hafa. Afaka mieritreritra ny sasany ve ianao?
Mpampita loharanom-pahalalana ho an'ny mpampianatra. Izahay dia namolavola ity torolàlana ity amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpampianatra, mpisolovava ary mpiasa misahana ny fiahiahy ny zaza mba hanampiana ireo matihanina amin'ny ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa hivezivezy amin'ny fanamby napetraky ny torolàlana momba ny sekoly transgender vaovao
Binary Australia namokatra ity PC Pack ity ho fanampiana ny ray aman-dreny manan-janaka any an-tsekoly hanoro hevitra ny fomba tsara hiatrehana ny firehan-kevitra momba ny miralenta ampianarina ao.